ခိုးပြေးဖို့ကြိုးစားဖူးတယ်…..
နေ့ ပြန်တိုးက များလေတော့
ကြုံရာ ကျပမ်း ပေါ့….
နေရာအနှံ လည်းသေခဲ့ ဖူးတယ်..
သချိုင်းအနှံ လည်းရွေးခဲ့ ဖူးတယ်….
မီးတစ်တို့လောက် ခင်ဗျာ…..
ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ပါတာများလို့ 
အတွေးတွေကို အမောဖောက်လို့ 
တန်ဖိုးဖြတ်လို့ ရရင်ဈေးမကြီးဘူးလို့ 
ကြိမ်ပေးလို့တန်အောင်
ကားခတက် လို့ ……..
Posted by နေချိုအေး at 10:09 No comments:
မင်းတို့ ရဲ့ အနမ်းနှင့်အတူ
နေ့ စဉ်နှင့် အမျှ
ငါ့ ရဲ့ 
ကြမ်းတမ်းတဲ့လက်တွေ နဲ့ ထွေးပွေ့ မခံနိုင်ရင်
မင်းက သူတို့ ကိုပိုမိုထွေးပွေ့ ပေးပါလေ…..
သူတို့ ကိုအစဉ် နွေးထွေးစေချင်ပါတယ်…….
သူတို့ အတွက် လမ်းပြသံတွေ
သနပ်ခါးလေးနဲ့ရောင်ရဲ့ တက်တဲ့
သူတို့ လေးတွေ အတုယူတက်ပါစေ…..
မမှန်တဲ့နည်း နဲ့ အောင်မြင်ခြင်းထက်
သူတို့ အတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်ပါစေ…..
ကျေးငှက်တေးသံ တွေနဲ့ အတူ
သူတို့ လေးတွေ နိုးထပါစေ…….
မင်းအသံ ည၀င်ပုံပြင်တွေနဲ့ အတူ
ဒါပေမဲ့ ပေါ့ပေါ့တန်တန် မနေအောင်
သူတို့ လေးတွေ သိနေပါစေလေ……
လွင့်စင်သွားတဲ့ တစ်နေ့ 
မင်းတို့ ကို ထွေးပွေ့ ထားချင်ပါသေးတယ်…..
ကမ္ဘာကြီး ရပ်တန့် သွားတဲ့ အထိ………………..
Posted by နေချိုအေး at 04:10 1 comment:
တာလီချိုး သံနဲ့ အတူ....
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ 
အမေ နဲ့ သား
တာလီချိုးသံ တွေနဲ့ အတူ
လက် တံတွေးဆွတ်သံနဲ့ အတူ
ညီလေး ၁၀တန်း အောင်တယ်လေ…..
သားလည်း ကျေစေ မ ပေါ့။
တန်ဖိုးတွက်သံ တွေနဲ့ အတူ
ဒီမှာ ဈေးတွေ အရမ်းတက်တာပဲ…
တစ်ရစ်ရစ် တက်သံ တွေနဲ့ အတူ
ကိုယ်ကြောင့် သူများဒုက္ခမရောက်စေနဲ့ နော်….
ဟုတ်ကဲ့…သားမှတ်ထား ပ မယ်…
အလန်းပေး နာရီသံနဲ့အတူ
တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိ်န်တွေနဲ့ 
လှိုင်းတွေ ငြိမ်သက်သွားသည် အထိ
Posted by နေချိုအေး at 03:042comments:
တစ်ယောက် မှာ မိုး
တစ်ယောက် မှာ ဆောင်း
တစ်ယောက် မှာ နွေ
လူတိုင်းလျှောက်တဲ့ လမ်းကို လျှောက်တယ်။
ပြောပြရင် အင်းအင်း ပဲလုပ်ကြမယ်။
ပြောမနေနဲ့ငါတို့ လည်းလူပဲ
ငါတို့ အိမ် ရောက်ပြီပေါ့ ….
လွမ်းတေး လည်း မဆိုဘူး။
ပြောမနေနဲ့သိတယ်
မှားရင်ပြင်မယ် နောက်မကျ သရွေ့ 
အသိတွေ မြင့် လည်း
ကမ်းတွေ ပြို လည်း
မိုးလေ၀သကောင်း လို့ 
ငါတို့ ယာမှာအသီးတွေ လှိုင်စေမပေါ့………
Posted by နေချိုအေး at 04:585comments:
မျှော်လင့်ချက် ဥပဒေသနဲ့ 
ကိုယ်ရင်ကို ဖွင့်ဖို့ 
ဘုန်းတော်ဘွဲ့ ကို ရွှေထီးဆောင်းပြီး
ဇာတ်ထုပ် သမိုင်းကြောင်းနဲ့ 
တကယ်ဆို မိုးတွေရွာချလိုက်ဖို့ ကောင်းတယ်………………
Posted by နေချိုအေး at 04:46 1 comment:
ဒီနေ့ လည်း ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့စာဖတ်မယ် ဆိုပြီး စာကြည့်တိုက်က စာအုပ်သွား ဌားမိတယ်။ကျွှန်တော် တို့ ကျောင်းမှာ မြန်မာတွေ ထူထောင်ထား တဲ့ စာကြည့်တိုက်ငယ် လေးရှိတယ်။ကျွှန်တော် အတွက်က တော့ တကယ့်ရွှေ ပဲဗျ ။ဆရာအောင်သင်းရဲ့ အမွေ ဆိုတဲ့ စာအုပ် ဌား လာမိတယ်။ အရင်ကလည်း ဖတ်ပြီး သားပါ။ ဒါပေမဲ့တစ်ခါ ဖတ်ရင် တစ်ခါ စဉ်းစားစရာ တွေ၊ ခံစားမှု အသစ်တွေ ပေး တက်ပါတယ်။ ဆရာ့ စာအုပ်ထဲ က စကားပုံ လေး တစ်ခု က ကျွှန်တော်ရဲ့လွန်လေပြီးသော စာသင်ခန်း ကို ပြန်ရောက် သွားစေ ခဲ့တယ်။စကားပုံလေး ကျွှန်တော် တို့ ကြားနေ ကြ ဖြစ် တဲ့ နေရိပ် လို နေပူကစောင့် တဲ့။အဲ့ဒီ နေ့ ကဆရာမက သူတို့ ဘာသာ စကား မှာ ရှိ တဲ့ စကားပုံတွေ သင်ပေးပါ တယ်။ ပြီးတော့ ကျွှန်တော် တို့ ကို မေး တယ်။မင်းတို့့နိုင်ငံ မှာကော ဘယ်လို စကားပုံ တွေ ရှိ လည်းပေါ့။ ကျွှန်တော် တို့ လည်း သိသလောက် ပြော ကြ တာပေါ့။ ကျွှန်တော့ အလှည့် လည်း ရောက်ရော ကျွှန်တော် က နေရိပ် လို နေပူကစောင့် ဆိုတာ ကိုပြောလိုက် တယ်။ ရှိသမျှ တက်သမျှ ဘာသာစကား ရှင်းပြ လိုက်တယ်။ အတန်ကြာတော့ ဆရာမကောင်း ကောင်း နားလည် သွားတယ်။ဆရာမ ခဏ စဉ်းစား ပြီး ကျွှန်တော်ကို ပြန်ပြော တယ်။
တပည့် မင်း ဘာ လို့ နေပူ ကစောင့်နေ မှာလည်း…………..
နေရိပ် ကိုမင်း ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ရ မှာပေါ့ တဲ့…………………
မရ ရင်တောင် မင်းတစ်ခု ခု ရ လိမ့် မယ်တဲ့………………….
ဒါပါ ပဲ။တကယ်ကို ကျွှန်တော်တို့ စောင့်ခဲ့ ကြတယ်။နေရိပ်လေးကိုပေါ့။ ကျွှန်တော် ဆရာမ ကို ပြန်ပြောချင်ပေ မဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြောခွင့် မရ ခဲ့ဘူး။ ပြောခွင့် ရခဲ့ ရင် လည်း………………………………………
Posted by နေချိုအေး at 10:306comments:
ဖိတ်ကာသွားပေါ့မေဆူတော့်။
မောင်ကြီး မြန်မြန် လှမ်းခဲ့တော့်။
လွမ်းတုံ့ တင်လေး။ ။
တခါတလေ ပေါ့ပေ့ါပါးပါး လေးတွေ ဖတ်ရတာ ရင်ကိုလန်းဆန်းစေတာ အမှန်ပဲဗျာ့........
Posted by နေချိုအေး at 12:59 1 comment:
မင်း. ...လား ငါ…လား
မင်း…ကိုနိုင်ဖို့ ဘာလို့ ဒီလောက်ခက်နေရတာလဲ
အစွမ်း ကုန်ပေါ့ 
Posted by နေချိုအေး at 03:57 1 comment:
တစ်နေ့ပေါ့ ကျွန်တော်လည်း စာတွေ ကျက်ရ မှတ်ရတာ ပျင်းရိရိ ရှိတာနဲ့ ကျွန်တော့်တို့ လမ်းထိပ်ရှိ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဆီ ခြေဦး လှည့်ခဲ့သည်။ လူကလည်း တော်တော်လေး ရှင်းနေသည်။ တပ်ထွက်တစ်ယောက် ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်ပါ။ သူ့မိန်းမက အဖျော်ဆရာ သူကစားပွဲထိုး အဆင်ကို ပြေနေတာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ကော်ဖီမစ် ပလိန်း တစ်ခွက် မှာပြီး သောက်နေမိသည်။ မိနစ် (၂၀) လောက်ကြာတော့ လူတွေလည်း ကျစပြုလာသည်။ ကျောင်းဆင်ချိန် အလုပ်သိမ်းချိန် ရောက်နေပြီးကိုး။ အတော်လေးကြာတော့ ဆိုင်ရှင်လင်မယားရဲ့ သားနှစ်ယောက်နှင့် သမီးသုံးယောက် ပြန်လာတာ ကျွန်တော်မြင် လိုက်ရသည်။ ဆိုင်ကလည်း လူအတော်လေး ကျစပြုနေပြီ။ ၄ တန်းလောက်ရှိမဲ့ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်နဲ့ ၂ တန်းလောက် ရှိမဲ့ သားတစ်ယောက် သမီးတစ်ယောက်နဲ့ အငယ်ဆုံးသမီးလေးကတော့ တစ်တန်းလောက် ရှိမယ်လို့ ထင်ရတာပဲဗျာ။ အကြီးတွေကတော့ ဆိုင်လုပ် ၀ိုင်းကူပေါ့။ နောက်မှ ကျွန်တော်သတိထား မိတယ်။ ဆိုင်ဘေးက ပုခက်စင်လေး ထဲမှာလည်း ကလေးတစ်ယောက်။ အားပါးပါး တစ်ပိုင် တစ်နိုင် မွေးမြူရေးပါလား။ အဲဒီမှာ ပြဿနာ စတော့တာပဲ တစ်တန်းလောက်ရှိမဲ့ ကလေးမက
သမီး။ ။ မေမေ မနက်ဖြန် သမီးတို့ကျောင်းမှာ သစ်ပင်စိုက် ပွဲရှိတယ်။ မျိုးပင်တွေ ယူခဲ့ရမယ်တဲ့ အမေ…..။
အမေ။ ။ ဟဲ့ဟဲ့…မအားသေးဘူး နောက်မှပြော…။
သမီး။ ။ အမေက ပြီးရင် မေ့သွားမှာ ခုကတည်းကပြောမှ ရမှာ၊ ဆရာမကသေချာ ပြောလိုက်တာ ဟိုတစ်ခါ ပေးလိုက်တဲ့ မျိုးပင်တွေ မျိုးမအောင်ဘူးတဲ့၊ ဒီတစ်ခါ မျိုးအောင်တဲ့အပင် ပေးပါတဲ့…။
အမေ။ ။ ဟဲ့ဟဲ့…နင့်ဆရာမ ဒီလောက်တောင်မှ မျိုးအောင်ချင်ရင် နင့်အဖေသာ မနက်ဖြန် ခေါ်သွားတော့..၊ သွားသွား ဒီကလေးတွေရှုပ်ကို ရှုပ်တယ်။
ကလေးမက သူ့အမေကို ကြောင်စစ မျက်လုံးနဲ့ ငေးကြည့်နေသည် ။ ပြီးတော့
သမီး။ ။အမေ ဘာလို့ အဖေကို ဆရာမဆီကို ခေါ်သွားရမှာလဲ..။
အမေက ခြေမြန်လက်မြန်ဖြင့် လက်ဖက်ရည် ဖျော်ခွက်ကို သူ့သမီးခေါင်းကို ခေါက်လိုက်၏ ။
အမေ။ ။ သွားသွား ဒီကလေးတွေ အလုပ်များပြီဆို ရှုပ်ကိုရှုပ်တယ် ၊ ဟိုမေး ဒီမေးနဲ့ သွားသွား
ကလေးမသည် ငိုမဲ့မဲ့မျက်နှာဖြင့် ဆိုင်ပြင်ထွက်သွား လေသည်။ ဒါပါပဲ ကျွန်တော်လည်း ဒါမျိုးဆို သေချာမှတ်မိတာ ကျောင်းစာသာ မေ့ရင်မေ့မယ်။ အပျင်းပြေပေါ့။ ရယ်ရရင် တော့အမြတ်ပေါ့။ ပျော်ရွှင်ရယ်မော နိုင်ပါစေ….။
Posted by နေချိုအေး at 12:542comments:
ကဗျာ အတွေး ပိစိကွေး
လူတွေက ပြောကြတယ် “ ပြည့်စုံလာရင် ဖန်တီး လာချင်တယ်”။ ဒီစကား မှန်မမှန်တော့ မပြောတတ်။ကျွန်တော်တော့ တကယ် ဖန်တီး ချင်လာတယ်။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ထဲက “သူငယ်ချင်း ဒါကိုယ်ရေးတဲ့ ကဗျာလေး ခံစားကြည့်ပါဦး၊ ဟိုဝတ္တု တွေကလည်း ကောင်းတယ် မြည်းကြည့်ပါဦး”။ ကိုယ်ကလည်း စာပေအခံလေး အသင့်အတင် ပါလေတော့ ဖတ်ရပြန်တယ်၊ မှတ်ရပြန်တယ်။ တခါတရံ ကာရန်လေး နဘေလေးက ရင်ကိုလာငြိရင် အလွတ်တောင် ကျက်လိုက်ရသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံရင် ကိုယ်ကလည်း အားကျမခံ ဖတ်ပြ ရွတ်ပြရတာပေါ့။ တခါတလေ အပြောခံရ သေးတယ်။ စာရူး ပေရူးတွေတဲ့။ ပြောကြပါစေ သူတို့မှ မရူးတတ်တာ။ သူတိုိ့ရူးလည်း ကောင်းကောင်း ရူးတတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ကျတော့လည်း ဟိုကဗျာလေး ဖတ်ပြရင်း အနိုင်ယူရတာပေါ့။ ဘာပါလိမ့်။ သြော်…သတိရပြီ။ “ လမင်းကို ခွေးဟောင်လို့ ၊ ရွှေလရောင် ပြောင်မပျက်၊ ထွန်းလျက်သာပင် ” ပေါ့။ သူတို့က ပြောသေးတယ် မင်းကဆဲ တာတောင် ကာရန်လေး နဘေလေးနဲ့ပေါ့ ဟဲဟဲ…ဘယ်ရမလဲ စာရူး ပေရူး လည်း အလှအပ လေးနဲ့ ဆဲတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေထားပါ။ ဖန်တီးတဲ့ အပိုင်းကို ဆက်သွားကြတာပေါ့။ ဒီလိုပဲ သူများက ကဗျာတွေရေးတော့ ရေးချင်တာနဲ့ ရေးမယ်ပေါ့။ အကျအန ပေါ့ဗျာ။ ကော်ဖီလေးဖျော် စာရွက်ခဲတံ အို…အစုံပေါ့ဗျာ။ စုံပြီဆိုတော့ ရေးမယ်ပေါ့ ဟန်ပြင်နေတာ နာရီဝက်လောက်ကြာမယ်။ အဲ…. ဒီတော့မှ မေ့နေတာ ဘယ်မှာလဲ အတွေး အို…အတွေး လာစမ်းပါဟ။ ခေါင်းတွေ ဘာတွေကုတ် ကော်ဖီလေးငုံ ဆေးလိပ်သောက်လိုက် ပြင်ဆင်ထားတာ တွေသာ ကုန်သွားတယ်။ အတွေးက ဘယ်ဆီနေမှန်း မသိဘူး အို…ရှုပ်ပါတယ် ဒီမရှိတဲ့ အတွေးကို ကဗျာရေးတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ မရှိတဲ့ အတွေးကို တွေးရပြန်တယ်။ ကဲ…ကြာနေပြီဟ ထွက်သမျှ အကုန်ရေးချ (အတွေးကို ပြောတာ)
အတွင်း ၃၇ ၊အပြင် ၃၇ မကျန်
မစစေသား ၊ ပေါက်မြောက်စေသား
ဗေလုနတ်စောင်း ၊ အပြင်းအထန်လှော်တဲ့
အရှင်နတ်သား ၊ ဂရုဏာထားကာ
ဘလော့ဂါတစ်ခွင်မှာ ၊ ပြဲပြဲစင်အောင်
မစစေသား ၊ အပူကပ်တိုင်ကြား လိုက်ပါကြောင်း......။
မှတ်ချက်။ ။ သတင်းဖြန့်ပေး သူများအား တိုးတိုး တိတ်တိတ် ပြုစုပါမည်။
Posted by နေချိုအေး at 10:413comments: